Manni Murtii shakkamtoota Siivil Aveeshinii irratti qorannoo dabalataaf guyyaa 7 eeyyame – Fana Broadcasting Corporate
Manni Murtii shakkamtoota Siivil Aveeshinii irratti qorannoo dabalataaf guyyaa 7 eeyyame
Finfinnee, Fulbaana 2,2011 (FBC)- Qorataan poolisii shakkamtoota Siivil Aveeshinii Ityoophiyaa 9 irratti guyyaa qorannoo dabalataa 14 gaafate keessaa guyyaa 7 eeyyameefii jira.
Manni Murtii Federaalaa sadarkaa 1ffaa ramaddii Dhadacha Yakkaa Araadaa dhimma shakkamtoota 9 har’a ilaalee jira.
Qorataan poolisii yeroo kennameef keessatti shakkamtoota irraa jecha fuudhuu, ashaaraa fi suura kaasuu akkasumas ragoolee sadi irraa jechaa fuudhee jira.
Yeroo itti aanutti wal jijjiirraa bilbilaa Biiroo Odeeffannoo Nageenyaa irraa sassaabuu,Daandii Qilleensaa irratti sabaaba shakkamtootaa kanaan kisaaraa irra gahee fi shakkamtoota hin qabamne too’achuu walumaagalatti dhimmoota yakka kana waliin hidhata qaban fiduu fi ragoolee dabalataa irraa jecha fuudhuf guyyaa dabalataa 14 Mana Murtii gaafatee jira.
Shakkamtootni karaa Abokaatoo isaanitiin gaaffii mirgaa gaafachuuf lagannaa hojii taasisuun mirga heerrii mootummaa nu gonfachiise waan ta’eef, sababoota poolisiin nurratti dhiyeesse fudhatama hin qabu jedhaniiru.
Akkasumas hojjettoota naannoleen walitti isaan kan fidu akka hin jirree fi Hagayya 18,2010 hojii akka lagatan xalayaan waajjiricha duursinee waan beeksisneef kisaaran gahe nu hin ilaallatu jechuun mirga wabii akka eeyyamamuuf gaafataniiru.
Poolisiin gama isaatin shakkamtootni qaama biraa waliin ta’uun keessa isaanitti shira ergaawwan garaa garaa qaban gochaa turan, kana malees sa’aatii itti diyaasporaan galutti diyaasporaa jeequf daandii qilleensaa akka adda citu hojjettoota kakasuun fi akka hin hojjenne dhorkuun akkasumas xiyyaarota galanii fi bahan akka hin qubannee fi hin baane turaa jechuun daandii qilleensichaa irratti kisaaraa hammana hin jedhamne geechisaniiru jechuun gaaffii isaan dhiyeessan mormee jira.
Manni Murtii bitaa fi mirga dhaaggeefate mirga wabii irra darbuun guyyaa qorannoo dabalataa gaafatame keessaa guyyaa 7 eeyyamee jira.
Taarik Addunyaatu gabaase.